I-Estilo 3 - Igumbi lesimanje nelithokomele, ukuhamba ngezinyawo okuyi-15min ukuya edolobheni - I-Airbnb
I-Estilo 3 - Igumbi lesimanje nelithokomele, ukuhamba ngezinyawo okuyi-15min ukuya edolobheni
Parramatta Park, Queensland, i-Australia
Ikamelo e-ikamelo lezivakashi ibungazwe ngu-Tamara
Igumbi lethu lokulala elikhanyayo nelinomoya linabo bonke ubuhle behhotela kodwa elinokufudumala kwekhaya. Kubandakanya indawo efanelekile yesimanje nethokomele enegumbi lokugezela elinesitayela, igumbi lokuhlala elinethezekile nekhishi lesimanje, ungajabulela ukuvuka udle ukudla kwasekuseni endaweni yokudlela engaphandle. Itholakala nje uhambo olufushane kuyo yonke into enikezwa yiCairns City. 500m ukuya esikhungweni sezitolo esikhulu saseCairns, i-1km ukuya e-Esplanade, yonke into oyidingayo isemnyango wethu. Uma leli gumbi libhukhiwe sicela uvakashele amanye amagumbi ethu i-Estilo 1 & 2.
Igumbi lethu lisefulethini elinemfashini elinamagumbi amathathu okulala phansi. Ifulethi lakhiwe ngo-2016.
4.89 · 467 okushiwo abanye
Ikhaya lethu lisemngceleni wedolobha endaweni engaphansi kweParramatta Park eCairns. I-Parramatta Park igcwele amakhaya esitayela sendabuko "Queenslander" futhi ilungele kakhulu i-CBD ne-Esplanade.
Asihlali endaweni nakuba abaphathi bethu (uJenny & Aldrin) behlala esitezi esiphezulu. Izivakashi zamukelekile ukuthi ziphumele phezulu futhi zizibone uma kukhona ezikudingayo nakuba singekude nomlayezo uma izivakashi zingathanda ukusithinta kukho konke ukuhlala kwazo.
Asihlali endaweni nakuba abaphathi bethu (uJenny & Aldrin) behlala esitezi esiphezulu. Izivakashi zamukelekile ukuthi ziphumele phezulu futhi zizibone uma kukhona ezikudingayo naku…
Hlola ezinye izinketho ezise- Parramatta Park namaphethelo